Itoobiya Oo Xirtay Dad Looga Shakiyay Inay Taageeraan TPLF - Radio...
Booliska Itoobiya ayaa sheegay inay xireen in ka badan 300 qof oo lagu tuhunsan yahay inay taageerayeen jabhadda ka dagaallanta gobolka ku yaalla waqooyiga dalkaas ee Tigray.
Dadkan waxaa laga qabtay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Taliyaha booliska Getu Argaw ayaa sheegay in albaabada laisugu dhuftay goobo ganacsi oo laga shakiyay inay lahaayeen dadkan la qabtay.
Kooxaha u doodo xuquuqul insaanka ayaa sheegay in qaar kamid ah dadkan la xiray la garaacay isla markaana loo kaxeystay meel ka baxsan magaalada Addis Ababa.
Mas’uuliyiinta waxay beeniyeen in la beegsanayo qowmiyadaha qaar.
Ciidamo dhowr ah oo ka kala socda gobollada Itoobiya ayaa loo daabulay gobolka Tigray si ay dagaal ugu qaadaan jabhadda Tigray kuwaas maalmihii lasoo dhaafay qabsaday dhul badan.
Wararka Somali4 mins ago